Izindiza Modern. Modern izindiza zempi - PAK-FA, MIG-29
Njengoba ukusetshenziswa lokuqala izindiza emkhakheni ngxabano lempi, indima yabo impi uyazimuka njalo ngonyaka. ukubaluleka Ikakhulukazi ashukumisayo zezindiza kule empini liye landa past 30-50 iminyaka. Combat izindiza unyaka ngamunye ayabaluleka izinhlaba eyinkimbinkimbi kakhulu futhi izikhali ezinamandla ngokwengeziwe. isivinini nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa yabo uyanda futhi uya ngokuya incipha ukubonakala ku-radar. izindiza banamuhla bangasebenzisa izinto owodwa handedly ukunquma umphumela empini, noma ngendlela ukhiye ukuthonya ke. Umlando lempi neminyaka yokugcina ngalokhu futhi wahluleka ucabange. Namuhla siyazi ukuthi yesimanje ukulwa izindiza futhi abanye izindiza ngasekhanda izikhali Russian.
Esikhathini ukungqubuzana zaseYugoslavia, NATO izindiza ukuxazulula lesi simo nge kokungenela oluncane noma abangenalo nhlobo phansi amabutho. Kungokufanayo kungabonakala nasemkhakheni inkampani yokuqala Iraq, lapho-Air Force enikeziwe ukunqotshwa yokugcina yebutho Saddam Hussein. Ukubhubhisa ibutho lasemoyeni, US Air Force nabasizi balo ngizoqothulwa angajeziswa zempi Iraqis.
Modern izindiza zempi ibiza kangaka ukuthi emazweni acebile kuphela izimo zivuma nokwakha. Ngokwesibonelo, fighter American F-22, isizukulwane yakamuva ayelingana cishe $ 350 million. Kuze kube manje, lo izindiza zempi bungumqhele wangempela inqubekela-phambili yesayensi lwezobuchwepheshe.
Isimo samanje zezindiza
Namuhla, yonke imibuso emikhulu bakhathazekile ukuthuthukiswa lesihlanu isizukulwane fighter. Ukukhethwa kuyinto Melika, ngoba selivele arsenal yayo izindiza ezinjalo. Le modeli F- 22 futhi F-35. Bebelokhu ngempumelelo kudlule konke ukuhlolwa okwenziwayo, zokukhiqiza mass futhi waba ingane yokutholwa. Phakathi naleso sikhathi, China, Japan neRussia athé ngemuva American.
Ekupheleni kwekhulu lamashumi amabili, iSoviet Union kwaba ngo lockstep nge Melika. MIG-29 futhi Su-27, kube sesizukulwaneni sesine akuyona kunabayeni imodeli American F-15 futhi F-16. Nokho, lapho iSoviet Union behlukana Kwathi hhayi izikhathi ezingcono ngoba ibutho lasemoyeni. Kwaphela iminyaka eminingi Russia imise umsebenzi ukudalwa fighters entsha. Melika, Okwamanje, ngenkuthalo ekuthuthukiseni izindiza zayo, futhi le ndiza F-22 sesivele sidaliwe ngo-1997. Kuyaphawuleka ukuthi le imodeli ayivunyelwe ukuthengisa kwamanye amazwe, ngisho umbimbi. Kubo, ngesisekelo F-22 Abaklami American ngikudalile F-35 izindiza, okuyinto, ngokusho kongoti, zingaphansi pre-umfanekiso waso ngezindlela eziningi.
Modern zezindiza Russian angabakhulula njengoba kuqhathaniswa impumelelo American e imodeli kuqala ethuthukisiwe MIG-29 futhi Su-27. Ukugubha bakuyiphi lempi, abasebenzi umkhakha lempi ngisho necebo ngezigaba ehlukile. MIG-29 futhi Su-27 ihlukaniswa njengoba "4 ++" isizukulwane. Lokhu kusikisela ukuthi nje kancane akwanele ukumangalela indawo isizukulwane lesihlanu. Lena akuyona Ezama "ukudlala imisipha." Izindiza zinhle ngempela. Inguqulo yakamuva zilethwe izinjini ethuthukisiwe, electronics ezintsha kanye navigation. Nokho, lokhu akukhona isizukulwane lesihlanu.
Plane PAK FA
Ngo parallel sesimanje okuhle ubudala fighter Russian zezindiza umkhakha usebenzela kummeleli isizukulwane lesihlanu kweqiniso. Ngenxa yalokho endizeni enjalo yasungulwa. Ibizwa ngokuthi PAK FA, esimelela "Sukhoi PAK FA." Eyesibili igama imodeli - T-50. Ngokusho ezakheke Futuristic ithi ayifane i iwuhlelo American. Model lokuqala ebuyele ngo-2010. Namuhla siyazi ukuthi indiza wenziwa seluphothuliwe futhi Maduze uzothatha ukukhiqizwa chungechunge.
Ngaphambi siqhathanisa T-50 nge sabafowabo American, ake sibone ukuthi ziyini izimfuneko kumele athobele izindiza wanamuhla isizukulwane lesihlanu. Military ngokuphelele eshiwo ngokucacile izinzuzo main yaleli su. Okokuqala, endizeni okunjalo ukubonakala ongaphakeme zonke amabanga wavelength. Okokuqala, akumelwe zitholiwe isignesha infrared kanye radar. Okwesibili, fighter isizukulwane 5th kufanele kube multi-functional futhi ezikwazi kakhulu. Okwesithathu, apharathasi ezifana uyakwazi ukuhamba ngesivinini leSupersonic ngaphandle afterburner. Okwesine, kungaholela vserakursny umlilo umlilo ezicitshwayo at uhla olude. Futhi, yesihlanu, indiza yesimanje lempi ngempela ifakwe "eziphambili" e-electronics, kungaba kakhulu ekunciphiseni inkinga ebhekene umshayeli.
Le ndiza we PAK FA, njengoba kuqhathaniswa US F-22 has a usayizi esikhulu futhi namaphiko, ngakho-ke, kuyoba kancane ezikwazi ukuphenduphenduka. Ngesikhathi T-50 ijubane esiphezulu kancane xaxa, kodwa sihamba - kancane. fighter isiRashiya ububanzi zama-practical, futhi ngesikhathi yamukelwa-off isisindo. Nokho, ethule cwaka, udlala "American". izindiza Modern idume izikhali hhayi kuphela futhi ekwazi ukumelana namandla omoya, indima ebalulekile eyadlalwa electronics, okuyinto kuncike umsebenzi wonke imisebenzi ebalulekile izinhlelo umshini. ERussia kulesi sici njalo emuva. Avionics imodeli PAK FA futhi kushiya okuningi okufanele oyifunayo. ukukhiqizwa izindiza yabadobi wethulwa 2014. Esikhathini esizayo esiseduze seluzoqala imodeli agcwele ukukhululwa.
Manje cabanga ezinye izindiza Russian, luveza sesithembiso esikhulu ukuze siphumelele.
Su-47 ( "Golden Eagle")
Lena ngempela imodeli ezithakazelisayo yasungulwa ngesikhathi design bureau Sukhoi igama. Kuze kube manje, namanje uhlala kuphela prototype manje. Ngenxa phambili-ishanelwe iphiko umshini inekhono kakhulu namakhono amasha ukulwa. I "Berkut" umzimba esiyinhlanganisela izinto kabanzi. Imodeli sidalwe njengoba i-prototype ye fighter isizukulwane 5th. Nokho, ukuze nezimfuneko zale izindiza, namanje kungazifinyeleli. I Su-47 akakwazi ukuthuthukisa isivinini leSupersonic ngaphandle ukufakwa afterburner. Esikhathini esizayo, abaklami ebekwe ukuxazulula le nkinga nge ukufakwa entsha injini phezu izindiza. Uhambo lokuqala luzoba ka "Berkut" senzeka ngo-1997. Wadala wayengomunye Ngokwesibonelo ukuthi isasetshenziswa njengoba izindiza test.
Yona futhi le ndiza entsha, okuyinto, ngokungafani sangaphambilini, usengenile kakade inkonzo ne Russian Lasemoyeni, ngenani izicucu 48. Imodeli futhi kwathuthukiswa kwaze kwaba okb Sukhoi. Yena kungokwalabo isizukulwane 4 ++, kodwa musa nje ukufuna imingcele yabo lobuchwepheshe kanye onilwelayo indawo isizukulwane lesihlanu.
Indiza akuyona okuningi ezahlukene kusukela imodeli T-50. The main umehluko - ukuntuleka ubuchwepheshe "Stealth" futhi AESA (asebenzayo ikhishiwe afanayo antenna). Indiza ifakwe yakamuva ulwazi nokulawula uhlelo, injini nge control wagxila Vector kanye airframe ukuqiniswa. I Su-35 uyakwazi ukuthuthukisa isivinini leSupersonic ngaphandle kusebenze afterburner. umshini zingamelana empini US F-22 izindiza amakhono efanele.
Kuze kube manje, umsebenzi Tupolev Kuyaqhubeka kwi webhomu entsha amasu, okuzokwenza esikhundleni model of the Tu-95 futhi Tu-160. Ukuthuthukiswa kwaqala ngo-2009, kodwa ngo-2014, ihhovisi design usayine inkontileka ne-Ministry Wezokuvikela. Ulwazi olunembile mayelana nezici imodeli okwamanje, thina kuphela ukwazi ukuthi uzokwazi Subsonic futhi ingalo namandla kunomFilisti Tu-160. Kusolwa ukuthi idelakufa entsha oyokwenziwa by design "ezindizayo iphiko".
Umshini wokuqala abaklami okubikezelwa, bayokhululwa isikhashana ngo-2020, futhi ngemva kweminyaka emihlanu ke ingena ukukhiqizwa. Ukudalwa izindiza ezifanayo eziqhutshwa baseMelika. Ngokusho iphrojekthi Next Generation Bomber iyakhiwa webhomu Subsonic, ukuba ezingeni eliphansi ukubonakala imiphumela yesikhathi eside ezayo (mayelana 9000 km). Njengoba kwabika i-media, umshini enjalo kungadla Melika 0.5 bhiliyoni.
izindiza ezintsha ukukhanya ezokuthutha, okuzokwenza esikhundleni imodeli ephelelwe yisikhathi An-26, wasebenzisa eRussia kuze kube manje isakhiwa namuhla ekuklanyweni Ilyushin bureau. Isivumelwano phakathi CB Ilyushin, futhi eMnyango Wezokuvikela we Russian Federation esayinwe 2014, kodwa umsebenzi ukudalwa umshini zenzeka kusukela 90.
Ukukhiqizwa serial IL-112 kumele lifike 2018. Idivayisi ngeke ifakwe pair of turbo esi izinjini. umthamo wayo kuyoba kuze engamathani ayisithupha. Kuyaphawuleka ukuthi le ndiza bazokwazi ukufeza Take-off kokwehla azikwazi kuphela zezindiza, kodwa futhi ku airfields eziwubhuqu. Ngaphezu version wezimpahla, abaklami uhlela ukwakha umgibeli futhi imoto ukuguqulwa. It wayezelwe Abadali, ukwazi ukusebenza ku izindiza zesifunda.
Ngokusho kwabezindaba Russian angaphandle, e Mikoyan sisebenza ukudalwa isizukulwane wesihlanu akukhuthazwa fighter MIG. Ngokusho UMqondisi Jikelele Bureau, abangaphansi kwakhe ngenkuthalo ukusebenza kulesi siqondiso. Ngesisekelo imoto entsha kungenzeka babe MIG-35 (eyodwa ngaphezulu omele 4 ++ isizukulwane). New MIG, Abadali kolwazi, kuyoba kakhulu sihluke imodeli T-50, futhi kuzothatha ku umsebenzi ukuhluka. Kunoma iyiphi imigomo okwamanje ukuthi ingxoxo ingahambi.
Namuhla sifundile ukuthi izindiza yesimanje futhi izindiza zazo kubhekwe imodeli phezulu design ubuchwepheshe. Yiqiniso, zezindiza - iyona ikusasa mboni wezempi, futhi omunye izimboni zayo ethembisayo.
Welding zethusi - amaphuzu ayinhloko inqubo
Industrial ukwakhiwa - isisekelo umnotho
Umshini womshini izipikili - izici kanye nencazelo jikelele
Obukhov isitshalo. Umlando yentuthuko
Industrial chillers: incazelo, isicelo, isevisi
Petroleum umkhakha eRussia
Ubani futhi ayamukela ngendondo "Ngoba ukubuya eCrimea?"
Yezandla kusukela amabhokisi juice. Izihloko eyenziwe amabhokisi ngezandla zabo: isithombe
Outsourcing noma insourcing?
Hypothyroidism ezinjeni: izimpawu, ukwelashwa, kubangela yesifo
Adume ngezinkanyezi Pavel Andreev? Astrology Finance and Business Pavel Andreev
Uyini willow? Incazelo nokubaluleka
Bag of Bones - ungubani? Theory ngemvelaphi engqungqutheleni elwisana iqhawe
Ushizi "burrata": Izici
Ibhekwa wezokudla 'Narine'. Izimpendulo ngakho
Izindaba Incredible ngokuphila Oxford
Ake sibone ukuthi yini imibuzo ephendulwa isandiso